BOGGA DAGITAANKA - Posti
Waxaan raadineynaa shaqaale cusub oo noogu soo biiro kooxda gaarsiinta firfircoon ee subaxa-hore Posti oo gobolka caasimada iyo Uusimaa. Sida qeybiyaha jaraa'idka, waxaad faraxgelineysaa boqolaal dad ah subax walba adiga oo si toos ah u gaarsiinayo jaraa'idka ee ka bilow warbaahinta miiska kafeega subixii. Waa inaad ku raaxeysataa jimicsiga banaanka, oo aad lacag sameysaa adiga oo sii socdo.
Waxaad ku shaqeyneysaa dambiisha gaarsiinta, baskiil ama gaari, waxay ku xirantahay aagaaga gaarsiinta. Waxaad sidoo kale heleysaa qalabka mobeel casri ah oo kaa caawinayo shaqada. Mushaarka saacadlaha qeybiyaha jaraa'idka ee gobolka caasimada waa EUR 8.98 saacadiiba. Wixii saacadaha la shaqeeyay inta u dhaxeyso 12 saqde dhexe iyo 6 a.m., waan bixinaa kordhinta habeenkii oo EUR 0.80 saacadiiba.
Waxaan u baahannahay:
in aad tahay ugu yaraan 18 sanno jir
in aad leedahay xaalad wanaagsan oo caafimaadka oo aad firfircoontahay oo aad leedahay hab dhaqanka madaxbanaan oo dhinaca shaqada
in xirfadaha af Finnishkaaga iyo Ingiriiska lagu qanci karo
in aad leedahay shatiga gaari kaxeynta. Suurtogalnimada lagu isticmaalayo gaarigaaga waxaa loo tixgeliyaa faa'ido.
shaqo waqti barkeeda ah (qiyaastii 3.5 saac/habeenkii) inta u dhaxeyso 1 a.m. iyo 7.30 a.m.
muddada jaheynta la bixiyo
faa'idada dharka shaqada dhamesytiran oo tayo sareyso leh
daryeelka caafimaadka shaqada oo ay la jiraan Mehiläinen iyo faa'idooyinka u shaqeynta hay'ad balaaran, sida ciyaaraha EazyBreak iyo faa'idooyinka dhaqanka
wadada shaqada ee sida u dhow gurigaaga oo suurtogalka ah
suurtogalnimada lagu balaarinayo kartida iyada oo la shaqeynayo saacado dheeraad ah ee shaqooyinka kale ee Posti.
Buuxi warbixintaada ama u imaw wareysi toos ah!
Ku buuxi warbixintaada boggaan oo waan kula soo xiriireynaa. Jimcooyinka, waxaad sidoo kale booqan kartaa xafiiskeena shaqaaleysiinta oo si toos ah noola yeesho wareysi inaga. Waxaan leenahay albaabo furan Jimco walba ka bilow 9 a.m. illaa 12 galabkii ee xafiiskeena shaqaaleysiinta ee ciwaanka Fredriksberginkatu 2, FI-00240 Helsinki.
Do you have a Finnish work permit?